Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny trano fandraisam-bahiny any Azia dia miahiahy bebe kokoa rehefa miakatra ny trosa
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Vaovao isan-karazany
Ireo tompona trano fandraisam-bahiny manerana an'i Azia dia mitodika hatrany amin'ny vahaolana famatsiam-bola famoronana mba hialana amin'ny korontana maharitra. Mitady fidirana bebe kokoa amin'ny famatsiam-bola ny trosa mba hanamafisana ny fikorianan'ny vola rehefa miatrika vanim-potoana tsy mbola nisy toy izany ny taha ambany noho ny tantara, ny sisin-tany mihidy ary ny fetra henjana amin'ny sidina noho ny areti-mandringana COVID-19, hoy ny JLL. Ny fiantraikan'ny tsimok'aretina amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny manerana an'i Azia dia mitohy manan-danja, miaraka amin'ireo hotely sy mpampiasa vola marobe no manatri-maso crunch cash tsy manam-paharoa satria mihena ny vola miditra amin'ny tolona mba hanefana ny vidiny raikitra.
Araka ny voalazan'ny filoha lefitra mpanatanteraky ny orinasa JLL's Hotels & Hospitality Group Adam Bury, sy ny filoha lefitra ambony Corey Hamabata, ny faneriterena dia manery ny tompony hijery safidy maromaro momba ny famatsiam-bola mandritra ny fotoana fohy, ity fifindrana vonjimaika ity dia antenaina hiteraka fotoana vaovao ihany koa.
Nampitandrina izy ireo fa ny hotely dia sahirana manapotika, mainka ny fanefana ny adidy amin'ny trosany ary mamela ny tompony hameno ny banga. Satria ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny no matetika no haingana indrindra mamaly ny fitakiana fikorontanana ary koa ny haingam-pandeha haingana indrindra, ny tompon-trano sasany dia mitady vahaolana akaiky hamindrana ny fikorianan'ny vola mandra-piverin'ny dia, ny fangatahana trano fandraisam-bahiny ary ny fiverenan'ny vola miditra.
Na izany aza, mihombo hatrany ireo famantarana ny fihenjanana ara-bola eo amin'ireo tompona hotely any Azia:
tsy ampy ny fikorianan'ny vola hanefana ny adidy efa misy izay mitaky fepetra fohy izay misy ny mpiasan'ny volon'ondry ary ny fandraisana ireo vahiny voamarina vola
fantsona fampindramam-bola nentim-paharazana tsy misy ary voafehy
ny tompona no miahiahy indrindra amin'ny vanim-potoana fanarenana lava sy ny fiverenan'ny asa seranam-piaramanidina / seranam-piaramanidina mahazatra
Resort dia miankina amin'ny ampahany betsaka amin'ny vahiny iraisam-pirenena - ny fizarana iray izay mety ho ela indrindra sitrana
ny filàna famerenana amin'ny laoniny ny fampindramam-bola, ao anatin'izany ny fanomezana fe-potoana maharitra
mahita mpampindram-bola izay mety hamatsy vola tsy manatanteraka fananana hanarenana ireo lesoka maharitra
Na dia mety tsy ho ela loatra aza ny famaritana ny vanim-potoana fanarenana farany ho an'ny indostrian'ny hotely, dia mety tsy ho ampy fotsiny ny fe-potoana fahasoavana vetivety hanampiana ny tompona maro hitety ny toe-javatra misy ankehitriny ary mety mila vola fanampiny hamenoana ny banga.
Na izany aza, ny safidy voafetra sy fohy amin'ny famatsiam-bola dia antenaina fa manintona ireo tompona hotely Thai hitazona azy ireo. Indrindra raha toa ka tsy maniry na tsy afaka mandeha ny mpandeha iraisampirenena.
“Miankina betsaka amin'ireo mpizahatany iraisam-pirenena ny toerana fizahan-tany lehibe eto amin'ny firenena. Raha ny tantara no jerena, ny mpizahatany iraisam-pirenena dia nahatratra 60% ka hatramin'ny 85% ny mpitsidika ny toerana malaza toa an'i Bangkok, Phuket, ary Koh Samui, "hoy ny JLL Hotels & Hospitality Group monina ao Bangkok.